02:14:42 am 27-Jan-2022
माइकल फराडेले पाएको सफलता
ब्रिटिस भोतिकविद् र रसायनशास्त्री माइकल फराडेले बंजीनको खोज गर्नुका साथै ग्यासलाई धातु अवस्थामा ल्याउने विधि पत्ता लगाए । विज्ञानमा उनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण योगदान विद्युतीय चुम्बकीय इन्डक्सन र इलेक्ट्रोलाइसिसको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छन् ।
माइकल फराडेका पिता फलामको काम गर्थे । उनको स्कुल शिक्षा ज्यादै कम थियो । उनको परिवार गरीब भएकोले फराड १३ वर्षको उमेरमा नै स्कुल छाडेर नोकरी गर्न विवश भए । उनी एक पसलमा किताब बाइन्ड गर्ने काम गर्न थाले । त्यहाँ फराडेले विज्ञानका पुस्तक पढे र विद्युत सम्बन्धी प्रयोग गरे ।
एक दिन फराडेले प्रख्यात रसायनशास्त्री सर हम्फ्री डेबीको भाषण सुने । फराडेले हम्फ्री डेवीलाई उनको भाषणको सार लेखेर चिठी पठाए र जागिर मागे । फराडेको पत्रबाट डेवी प्रभावित भए र उनलाई आफ्नो सहायक बनाए ।
फराडेले डेबीको साथमा क्लोरिनको विशेष अध्ययन गरे । एकपटक डा. पेरिस उनको प्रयोगशालामा आए । एउटा ट्युबमा तेलजस्तो द्रव्य देखेर डा. पेरिसले फोहोर ट्युब प्रयोग गरेको भन्ने ठाने । फराडेले डा. पेरिसलाई सो तत्व तेल नभई क्लोरिन भएको बताए । यो सुनेर डा. पेरिस आश्चर्यचकित भए । त्यो एउटा महत्वपूर्ण खोज थियो । फराडेले क्लोरिन ग्यासलाई चापद्वारा द्रव्यमा परिणत गर्न सिकेका थिए । पछि उनले अन्य ग्यासमा पनि यस्तै प्रयोग गरे ।
यसै क्रममा उनले विद्युत–चुम्बकीय खोज पनि जारी राखे । १८३१ मा उनले विद्युत चुम्बकीय इन्डक्सनको महान् खोज गरे । चुम्बकीय क्षेत्रको प्रयोगबाट विद्युत उर्जा प्राप्त हुने कुरा उनले सावित गरे । वास्तवमा माइकल फराडेले विद्युतका नयाँ स्रोतहरु र डाइनामोको निर्माण पनि गरे । साँचो अर्थमा उनी नै विद्युतको व्यवसायिक र व्यवहारिक उत्पादनका जनक थिए ।